ဆုံဆည်းရာ: မိမိကိုယ်ကို ဘာသာပြန်ခြင်း
ကလေးများရဲ့ ငိုသံ ရယ်သံ
ငိုလွယ် ရယ်လွယ် သေချာမှုတွေထဲက
ရစ်ပစ်နှောင်ထွေး ခဏ ခဏ။
စာအုပ်၊ ကျောက်တံ၊ လွယ်အိပ်
တိမ်တိုက်ဖွဲ့မိုး ညိုးလျ ညိုးလျ။
တံခါး ခေါက်တတ်တဲ့ လက်
ဘာကို နှုတ်ဆက်မယ် ?
ဘာ ခရီး ဆက်မယ်?
လှိုင်းတက် လှိုင်းဆုတ်၊ လှိုင်းပုတ် ဗျိုင်းပျံ
လူ့စိတ်တွေ တုန်ခါဖို့ နေနေသာသာ
ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပေမယ့်
စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၁၉၈၆။